रुससँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सेक्स टेप ! - Asian Samachar
रुससँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सेक्स टेप !
Asian Samachar बिहिबार, पुस २८, २०७३ (1 year ago) विश्व
एजेन्सी- रुससँग अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक भन्दा बढी सेक्स टेप रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ र, यसकै आधारमा रुसले हृवाइट हाउस सम्हाल्ने तयारीमा रहेका ट्रम्पलाई ब्लाकमेलिङ गर्ने खतरा रहेको अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सीआईएको दाबी छ ।
मंगलबार लिक भएको एक मेमोमा ट्रम्पले यौनकर्मीहरुको एउटा समूलाई मस्कोको होटलमा लगेको दाबी गरिएको छ । र, रसिया जासुसी संस्था एफएसबीले गोप्य क्यामरा र माइक्रोफोनमार्फत त्यहाँ भएको सबै गतिविधि कैद गरेको उक्त मेमामा दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति भए लगतै ट्रम्पले यसलाई झुटो समाचार भन्दै पटक पटक खण्डन गरेका छन् । तर, अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरुमा लगातार यो खबर आइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक बीबीसीका वासिङटन सम्वाददाता पल वेडले बोलेका छन् । उनका अनुसार सीआईएलाई लाग्छ कि रुससँग ट्रम्पको एक भन्दा बढी सेक्स टेप छन् । र, अमेरिकी चुनाव अघि नै एक संस्थाले आफूलाई सतर्क गराइएको थियो । तर, नदेखेकाले नपत्याएको उनले बताए ।
तर, यसबारे अध्ययन गरिरहेका सीआईएका एक अधिकारीसँग अप्रत्यक्ष सम्वादका गरेको पल वुडले बताए । उनले भने, मैले जवाफ पाएँ कि एक होइन थुप्रै टेप छन् । अडियो र भिडियो दुबै । अलग अलग तरिकाका र एक नभई धेरै ठाउँका । मस्कोको रिट्ज कार्लटन र सेन्ट पीटरबग्र्सको पनि ।
ट्रम्पले नोभेम्बर २०१३ मा मस्कोको यात्रा गरेका थिए । र, यो टेप त्यही बेलाको हुनसक्ने अनुमान छ । ट्रम्पका समर्थकहरुले भने यसलाई राजनीति प्रेरित आक्रमण भनेका छन् । स्वयंम ट्रम्पले ट्वीट गर्दै सोधेका छन्, के हामी नाजी जर्मनीमा बसिरहेका छौं ?
विहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवलाई पुन: ५ वर्षको जेल सजाय
कुर्दिस लडाकुलाई समर्थन नगर्न अमेरिकालाई टर्कीको आग्रह
कैदीबन्दीद्वारा आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मी आन्दोलित
उत्तर कोरियाली महिलालाई दक्षिण कोरियाको भ्रमण खुल्ला